भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ! नत्र … – Online Khabar 24
भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ! नत्र …
३. तेस्रोमा तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।४. त्यसैगरी चौथोमा यो दिन बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।
५. पाचौमा सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । भने बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि दुवोलाई भने बिहिवार टिप्नु हुँदैन ।६. त्यसैगरी छैटौमा रहेको छ, प्लास्टिकको बोत्तल वा कुनै अपवित्र धातुको भाँडामा गंगाजल राख्नु हुँदैन । गंगाजल तामाको भाँडामा राख्नु सुभ मानिन्छ ।यसो गरेर केतुकीको फुल पनि शिवलिंगमा चढाउनु हुँदैन।
७. सातैमा चाही, कुनैपनि पुजामा मनोकामनाको सफलताको लागी दक्षिणा अवश्य चढाउनु पर्छ । र यस बेलामा माता लक्ष्मीको विशेष रुपले कमलको फुल अन्यायका देवता शनि कर्मको ग्रह मानिन्छ । यीनको गलत दृष्टिबाट बच्न मानिसले के के गर्दैनन् । शनिले जहिल्यै पनि मेहनती मानिसको साथ दिन्छन् । शनिको कृपा रहेमा रंकलाई राजा र राजालाई रंक बनाउन सक्छन् । गरिबको सेवा गर्नेमा शनिको राम्रो दृष्टि रहन्छ । योसँगै एउटा जानकारी लिनुहोस कि शनिले केहि राशिमा जहिल्यै न्याय गर्दछन् ।
तुला राशिमा शनिको जहिल्यै राम्रो दृष्टि रहन्छ । तुला राशिको विनम्र स्वभाव हुन्छ । यीनिहरु विवादबाट सधैँ टाढा रहन्छन् । तुला राशिका व्यक्ति मेहनती र इमान्दारीले जीवन जीउन मनपराउँछन् । यस्तो भनिन्छ कि यो राशिका व्यक्ति मेहनती र गरिबको सहयता गर्ने हुन्छन् ।यस्तै अर्को राशि जसमा शनिको कृपा रहन्छ, कुम्भ राशि । शनिदेव कुम्भ राशिको स्वामी हो । यो राशिका व्यक्तिलाई शनिदेव मेहनतको फल दिन्छन् । उनीहरुको थोरै प्रयत्नले पनि शनिदेव प्रशन्न हुन्छन् । यस्तो मानिन्छ कि कुम्भ राशिका जाति शान्त र कसैलाई धोकाखडी नगर्ने हुन्छन् ।
शनिदेवको अर्को प्रिय राशि मकर हो । शनिदेवले यो राशिका व्यक्तिमा जहिल्यै राम्रो कामको लागि फल दिने गर्दछन् । यो राशिका व्यक्तिहरु गम्भीर र सहनशिल हुन्छन् । यी व्यक्तिहरु मनको विपरित केहिपनि गर्दैनन र शनिदेवको साथमा हुन्छन् ।यसैगरी व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भविष्य बारे बताउने गर्छन् ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्यवसाय र नोकरी गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।आईतबारः आइतबारको दिन गीत ,बाद्य वादन, राजसेवा, गाइगोरु, कि न बे च गर्ने, हवन गर्ने मन्त्र उपदेश लिने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र , सुन, तामा, उनी, बस्त्र जस्ता सामाग्रीको किनबेच गर्ने, रातो वस्तुको कारोबार गर्ने जस्ता कार्य गर्नु धेरै शुभ रहनेछ ।
सोमबारः सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको प्रिय दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । सोमबारको दिन गाई, भैसी, घोडा, फुल, घाँस, वृक्ष्य, मोती, चाँदी, आदिको किनबेच गर्नु महिलाहरुको संगत गर्नु निकै राम्रो मानिन्छ ।मंगलबारः मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पूजा आरधना गर्ने दिन । यो दिन गणेश भगवानका पूजाआज गरे जस्तो सुकै कामको सुरुवात गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बुधबारः यो दिनलाई पुण्य आर्जन गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बुधबारको दिन वस्तु कला, चित्रकला र अध्ययनमा सोचेभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ ।बिहिबारः यो दिन धार्मीक कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो दिन मन्दिर निर्माण, मन्त्र जप, नवग्रह पुजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
शुक्रबारः यस दिन गायण, मणी, रत्न, हिरा, सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अलंकार, बाणिज्य, व्यापार, गाई वस्तु मिनबेच गर्नु, द्रव्य भण्डारण गर्नु धन सञ्चय गर्नु, कृषि कार्य सुरुवात गर्नु शुभ मानिन्छ ।शनिबारः शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्रभाव पर्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झु टो बोल्नु , ठगि गर्नु , क प ट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उद्घाटन, फ ला म आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमार्पित गरीन्छ । यस फुललाई पाँच दिनसम्म जल चढाएर पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले घरको मन्दिरमा विहान अनी साँझ दिप अवश्य बाल्नुपर्छ । साभार गरियको खबर यस्तै
Prevयौ’न सम्बन्धबाट टाढा रहे १५० वर्ष सम्म बाँच्न सकिने !
nextबिहानै ९ लाख बाती बलेको फोटोलाई छुनुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नु होस, सारा दुख पाप काटिने छ र लक्ष्मी प्राप्ति हुनेछ।